Vehivavy Filipina Mitantara ny Nahatonga Azy Hiatrika Fanamelohana ho Faty noho ny Fanondranana Rongony · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 18 Avrily 2015 8:45 GMT
Vakio amin'ny teny Español, русский, Français, 日本語, বাংলা, English
Nilaza ny tantarany mikasika ny niafarany tany am-ponja ny mpiasa Filipina iray miatrika fanamelohana ho faty noho ny fampidirana zava-mahadomelina an-tsokosoko tao Indonezia.
Nosamborina tamin'ny taona 2010 tao Indonezia i Mary Jane Veloso rehefa nahitan'ny manampahefana tao amin'ny seranam-piaramanidina herôinina (rongony) milanja 2,6 kilao tao anaty entany, nosazian'ny Fitsarana Tampony Indoneziana ho faty izy. Nolazainy fa nanaiky hitondra ilay valizy izy na dia tsy fantany aza izay tao anatiny.
Tsy dia nahasarika ny fampitam-baovao Filipina ny tantarany tao anatin'ny dimy taona, saingy niova izany rehefa nampakatra fitsarana ambony ny handinihana indray ny raharaha momba azy ireo vondrona mpifindra monina ary nandrisika an'i Indonezia mba handinika indray ny fanapahan-keviny hanatanteraka ny fanamelohana ho faty ho an'ny raharaha rehetra mikasika ny rongony ireo vondrona iraisam-pirenena.
Nozarain'ny rahavaviny ny atitra an-tsoratr’i Mary Jane an-tanana. Amin'ny teny Anglisy ratsiratsy no nanazavany ny antony nandaozany ny firenena tamin'ny taona 2010 :
Nohadihadiana tao anatin'ity lahatsary ity ny fianakavian'i Mary Jane, nanamafy izy ireo fa nandao ny firenena izy mba hiasa fa tsy hampiditra rongony an-tsokosoko:
Rehefa nahafantatra ny tantarany sy nanadihady ny raharaha momba azy ireo vondrona mpifindra monina dia nieritreritra fa niharan'ny fanondranana olona i Mary Jane. Araka izany, miantso ny governemanta Indoneziana izy ireo mba handinika indray ny raharaha momba azy. Nandefa ity taratasy ity ho an'ny filoha Indoneziana ny Migrante :
Mihevitra ihany koa ny Fikambanana Iraisam-pirenen'ny Mpisolovava Demaokratika, vondrona ankatoavin'ny Firenena Mikambana fa nolavina tamin'i Mary Jane ny dingana tokony arahina satria tsy nomena mpisolovava sy mpandika teny matihanina avy hatrany araka ny tokony ho izy izy :
Nolavin'i Indonezia ny fitakiana rehetra hanovana ny fanamelohana ho faty mikasika ny heloka bevava mifandraika amin'ny zava-mahadomelina. Nolazainy fa ilaina ny mandresy ireo vondrona mpanondrana rongony, izay efa nametraka an'i Indonezia ho fihaonan-dalan'ny fanondranana zava-mahadomelina.
Mandritra izany, vondrona mpifindra monina filipîana manerana izao tontolo izao, mpahay lalàna momba ny zon'olombelona, ary ny mpikambana fiarahamonim-pirenena Indoneziana sasantsasany no miezaka manao izay hanavotana an'i Mary Jane.